शिल्पा किन बोल्न मानिनन् ? « Mazzako Online
शिल्पा किन बोल्न मानिनन् ?
अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल अहिले एकसाथ दुई मुद्दा भोगिरहेकी छिन् । निर्माता छविराज ओझासँग ३ बर्ष लामो बैबाहिक जीवन समाप्त गर्ने सोचका साथ उनी डिभोर्सका लागि अदालत त पुगिन् । तर, सोही समयमा उनीमाथि बहुबिबाहको आरोप समेत लागेर मुद्दा चलिरहेको छ । अदालतले उनलाई पक्राउन पुर्जी पनि जारी गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्चले तत्काल नपक्रन आदेश दिएसँगै उनलाई राहत त भएको छ, तर क्लिन चिट नआएसम्म चैनको निद्रा कहाँ आउँछ र ? शिल्पा सर्वोच्चबाट क्लिन चिट पाएपछि पहिलो पटक कबड्डी कबड्डी कबड्डी फिल्म हेर्न पुगिन् । काठमाण्डौको जय नेपाल हल पुगेकी उनले मिडियासँग कुनै प्रतिक्रिया नै दिइनन् ।
फिल्म हेर्नु अगाडि रेड कार्पेटमा उक्लिएर धेरै कलाकारले तस्वीर खिच्दा उनी लुसुक्क हल भित्र छिरिन् । बाहिरिदा पनि उनले कुनै प्रतिक्रिया दिइनन् । यो मुद्दाबाट क्लिन चिट नपाएसम्म उनलाई मिडियासँग प्रतिक्रिया दिन पनि अप्ठ्यारो लागेको हुनसक्छ ।